BBC Somali - Warar - Xilligii dawladda ku-meel-gaadhka ah ee Somalia oo maanta ku eg
Xilligii dawladda ku-meel-gaadhka ah ee Somalia oo maanta ku eg
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 20 Agoosto, 2012, 03:32 GMT 06:32 SGA
In ka badan 200 oo xubnood oo ka tirsanaan doona baarlamaanka cusub ee Somalia ayaa la bilaabay shalay ilaa iyo xalay in loo qaybiyo kaadhadhkii aqoonsiga. Waxana la filayaa in la dhaariyo maanta, isla markaana ay yeeshaan fadhigoodii ugu horreeyey. Waxana la filayaa in fadhiga ugu horreeya uu guddoomin doono mudanaha ugu da'da weyni.
Maanta waxa ku eg xilligii dawladda ku-meel-gaadhka ah ee federaalka ah (TFG) ee Somalia, sidii uu ahaa qorshihii hore ee Roadmap oo dhigayey in isla maantaba la doorto madaxweyne. Hasse ahaatee waxa dib u dhacay dhawr jeer waqtigii kama-danbaysta ahaa ee loo qabtay in lagu soo dhammaystiro xulista baarlamaanka cusub iyo inay doortaan afhayeen. Ilaa haddana waxa weli sii jiitamaya khilaafyo ka taagnaa dhinacyada saamiga haweenka ee baarlamaanka iyo dadka guddiga dib-ueegista xulashada baarlamaanka ay ka reebeen liisaskii la soo gudbiyey.
Shalayna magaalada Muqdisho waxa tegey wafdi ka kooban bulshada caalamka oo ay ka mid yihiin Jamciyadda Qaruumaha ka Dhaxaysa, Ururka Midowga Yurub, Ururka Midowga Afrika, Maraykanka, Ingiriiska, Talyaaniga, iyo dalalka la-deriska ah Somalia, kuwaasi oo kulammo la yeeshay madaxda dawladda TFG, isla markaasina sheegay in xulitaankii xubnaha cusub ee baarlamaanku uu meel fiican maraayo, lana filayo in si dhakhso ah loo dhammaystiro hawlaha weli dhiman.